အာဗီဆန်နာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပါရှန်းလူမျိုး စွယ်စုံရပုဂ္ဂိူလ်၊ သမားတော်နှင့် တွေးခေါ်ပညာရှင်
အာဗီဆန်နာ (အင်္ဂလိပ်: Avicenna သို့မဟုတ် Ibn-Sīnā) (အာရပ်: ابن سینا‎) (c. 980 – June 1037) သည် ပါရှန်းလူမျိုး စွယ်စုံရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီး အစ္စလန်မစ် ရွှေခေတ်၏ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆုံး တွေးခေါ်ရှင်နှင့် စာရေးသူအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ သူသည် စာအုပ်ပေါင်း ၂၄၀ ဝန်းကျင် ရေးသားခဲ့သည်။ ၁၅၀ မှာ တွေးခေါ်ပညာရပ်တွင်ဖြစ်ပြီး ၄၀ မှာ ဆေးပညာ၌ ဖြစ်သည်။ သူ၏ ထင်ပေါ်ဆုံး လုပ်ငန်းများမှာ တွေးခေါ်မှုပိုင်းနှင့် သိပ္ပံနည်းကျ စွယ်စုံကျမ်း The Book of Healing နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွယ်စုံကျမ်း Canon of Medicine ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းဆေးစွယ်စုံကျမ်းသည် အလယ်ခေတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်ပေါင်းများစွာ၏ သင်ရိုးညွန်းတမ်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၃ တွင် အာဗီဆန်နာ၏ Canon Of Medicine အား နယူးယောက်မြို့၌ ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အပြင် အာဗီဆန်နာသည် နက္ခတ္တဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ပထဝီဝင်၊ စိတ်ပညာ၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ကဗျာအစရှိသော နယ်ပယ်များစွာ၌ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
Conventional modern portrait
↑ ၁.၀ ၁.၁ Encyclopedia of Islam: Vol 1, p. 562, Edition I, 1964, Lahore, Pakistan
↑ In Bukhara (19 years) then Konye-Urgench, Khwarezm (13 years).
↑ In Gorgan, 1012–14.
↑ In Ray, Iran (1 year), Hamadān (9 years) and Isfahan (13 years). D. Gutas, 1987, ''AVICENNA ii. Biography'', Encyclopædia Iranica။ Iranicaonline.org။ 2012-01-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Avicenna (Persian philosopher and scientist) – Britannica Online Encyclopedia။ Britannica.com။ 2012-01-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. Paul Strathern (2005)။ A brief history of medicine: from Hippocrates to gene therapy။ Running Press။ p. 58။ ISBN 978-0-7867-1525-1။ [လင့်ခ်သေ]. Brian Duignan (2010)။ Medieval Philosophy။ The Rosen Publishing Group။ p. 89။ ISBN 978-1-61530-244-4။ . Michael Kort (2004)။ Central Asian republics။ Infobase Publishing။ p. 24။ ISBN 978-0-8160-5074-1။
↑ O'Connor၊ John J.; Robertson၊ Edmund F.၊ "အာဗီဆန်နာ"၊ MacTutor History of Mathematics archive၊ University of St Andrews .
↑ Nasr၊ Seyyed Hossein (2007)။ "Avicenna"။ Encyclopædia Britannica Online။ 31 October 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2007-11-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (အကူအညီ)
↑ Avicenna 980–1037။ Hcs.osu.edu။ October 7, 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-01-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Avicenna's Canon Of Medicine, by Cibeles Jolivette Gonzalez
↑ Avicenna", in Encyclopædia Iranica, Online Version 2006။ Iranica.com။ 2010-01-19 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဗီဆန်နာ&oldid=723636" မှ ရယူရန်
၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။